आलुको उत्पादन घट्यो ! – Lekbesi Khabar
आलुको उत्पादन घट्यो !
बाग्लुङ :गत वर्ष ४० मुरी आलु भित्र्याएका बागलुङका किसान योगेन्द्रमान छन्त्यालले यसपालि बल्लतल्ल २० मुरी आलु फलाउन सके । बीउको जोगाड र आफन्तलाई कोसेली दिएपछि बेच्ने आलु अझै कम ठहरियो । तमानखोला गाउँपालिका–४ लाम्मेलाका छन्त्यालले भने, “अहिले आलु राम्रो फलेन, कसैलाई त बिउ जोगाउनै ठिक्क भयो ।”
बसाइँसराइ, श्रमशक्तिको विदेश पलायन इत्यादि कारणले पछिल्लो समय आलु खेती विस्तारै कम हुँदै गएको वडाध्यक्ष छन्त्यालको भनाइ छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष जोकलाल बुढाले छ वटै वडामा आलु खेती हुने गरेको बताए । उनका अनुसार गाउँपालिका प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाअन्तर्गत आलु ‘जोन’ कार्यक्रममा समावेश छ । उक्त परियोजनामार्फत गत वर्ष आलु किसानलाई कृषि सामग्री र औजार वितरण गरिएको थियो । यो वर्ष कृषि समूह निर्माण, बिउ वितरणलगायतका कार्यक्रम भइरहेको जनाइएको छ । रासस
२८ कार्तिक २०७७, शुक्रबार ११:१८ November 13, 2020
यस वर्ष तिहारमा देउसीभैलो नखेल्न काठमाडौं प्रशासनको आग्रह, खेले कारवाही हुने
महाकाली नदीमाथिको झोलुङ्गे पुलमा आवागमन बन्द !